Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Go'anka Tottenham Ee Harry Kane Oo Xaalka Sii Adkeeyay, Juventus Oo Ka Hadashey Waxa Hor Taagan Heshiiska Cristiano Ronaldo Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga: Go’anka Tottenham ee Harry Kane oo xaalka sii adkeeyay, Juventus oo ka hadashey waxa hor taagan Heshiiska Cristiano Ronaldo iyo Qodobo kale
Wararka Suuqa kala iibsiga: Go’anka Tottenham ee Harry Kane oo xaalka sii adkeeyay, Juventus oo ka hadashey waxa hor taagan Heshiiska Cristiano Ronaldo iyo Qodobo kale
July 2, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton Yves Bissouma ayaa weli diirada u saaran Liverpool laakiin Reds ayaa u aragta xiddiga reer Portugal Renato Sanches inuu yahay mid aad qaali u ah. sida laga soo xigtay Liverpool Echo
Tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo ayaa lagu soo waramayaa in loo xaqiijiyay in Harry Kane uusan ka tagi doonin kooxda xagaagan. sida laga soo xigtay Daily Mail
James Rodriguez ayaa wadahadalo kula jira Milan isagoo 10 milyan oo ginni uga soo dhaqaaqaya Everton – sida laga soo xigtay Antena 2 .
Milan ayaa ku dhibtooneysa inay heshiis la gaarto Brescia oo ku saabsan heshiis joogto ah oo Sandro Tonali ah – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Declan Rice, oo 22 jir ah, ayaa diiday labo dalab oo qandaraas ah oo kaga yimid West Ham , waxaana uu doonayaa in lala socodsiiyo xiisaha ay u qabaan kooxaha Chelsea, Manchester United iyo Manchester City. (Theguarian
Matias Vecino ayaa qarka u saaran inuu sii joogo Inter Milan ugu yaraan hal xilli ciyaareed oo dheeri ah – sida ay warinayso Calcio Mercato .
Juventus ayaa dib u shiday xiisihii ay u qabtay weeraryahanka Roma Edin Dzeko – sida ay warinayso Calcio Mercato .
Juventus wax war ah kama helin weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, kaasoo ah inuu doonayo inuu ka tago kooxda, iyo in kale sida laga soo xigtay madaxa fulinta ee Serie A, Federico Cherubini. (Goal)
Milan ayaa ka fiirsaneysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sampdoria Mikkel Damsgaard – sida laga soo xigtay Gazzetta Dello Sport .
Real Madrid ayaa isha ku heysa daafaca midig ee Manchester United Diogo Dalot – sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Borussia Dortmund ayaa u aqoonsatay daafaca RB Leipzig Marcel Halstenberg inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay qortay BILD .
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Barcelona Matheus Fernandes ayaa qarka u saaran inuu ku laabto Palmeiras – sida ay qortay ESPN .
Tottenham ayaa isha ku heysa inay heshiis amaah ah kala soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Miralem Pjanic – sida laga soo xigtay SPORT .
Paris Saint-Germain ayaa heshiis la gaartay daafaxa Sergio Ramos – sida laga soo xigtay RMC Sport .
Ciyaaryahanka Real Madrid Nacho Fernandez ayaa qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo uu kula sii joogayo kooxda ka dhisan caasimada Spain ilaa 2024. sida ay qortay Goal
Ilo wareedyo ka tirsan Arsenal ayaa u sheegay Goal in Gunners aysan wax dalab rasmi ah ka gudbin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli. Goal
Manchester United ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixato labo daafac dhexe xagaagan.
Red Devils ayaa la sheegayaa inay ku sii dhawaaneyso daafaca Real Madrid Raphael Varane, halka xiddiga Villarreal Pau Torres uu isna bartilmaameed kale u yahay Ole Gunnar Solskjaer. sida laga soo xigtay Manchester Evening News.